ဒီပြိုင်ပွဲကိုကြည့်ပါ - DevDad မှ iMac ကိုရယူပါ။ | Martech Zone
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်ပြိုင်ပွဲမည်မျှနှင့်၎င်းတို့မည်မျှကောင်းသည်ကိုအနည်းငယ်အာရုံစိုက်မိသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပေးသောလက်ဆောင်သည်ဤနေရာတွင်နီးကပ်သောကြောင့် (စပွန်ဆာအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။ )
ယနေ့ညငါဖြတ်ပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် နေပါ။ အဖေ iMac Give-Away။ ဒီပြိုင်ပွဲကိုကောင်းကောင်းလုပ်ထားတယ် ၎င်းတွင်ထူးကဲသောဆု၊ ကြီးမားသောရုပ်ပုံများနှင့်ပြိုင်ပွဲဝင်ရန်လိုအပ်သည့်အသေးစိတ်စာရင်းများရှိသည် - တစ်ခုချင်းစီသည်ဘလော့ဂ်နှင့်စပွန်ဆာကိုမြှင့်တင်သည်။ Mike 20 new Apple iMac အသစ်စက်စက်ကိုအထုပ်ကြီးတစ်ခုဖြင့်စုစည်းလိုက်သည်။ ၎င်းတွင် 2.0 GHz Intel Core2Duo ပရိုဆက်ဆာ၊ မှတ်ဉာဏ် ၁ GB၊ ၂၅၀ GB GB hard drive၊ 1x SuperDrive နှင့် 250 ′တောက်ပြောင်သောမျက်နှာပြင်ရှိသည်။ ၎င်းတွင် mouse နှင့် keyboard ပါဝင်ပြီးဒေါ်လာ ၁၁၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်။
ဒါအရမ်းကောင်းလို့အဲဒါကိုငါ post တစ်ခုရေးမယ် နှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်!
ပထမ ဦး ဆုံးသူ Mike အကြောင်း - နောက်ကွယ်မှဘလော့ဂါ နတ်သမီးသူ့စကားလုံးများဖြင့်
ကျွန်တော့်နာမည်ကမိုက်ခ် ငါနောက်ကွယ်ကစကားသံဖြစ်၏ DevDad.com။ ကျွန်ုပ်သည် Florida ရှိ Tampa Bay မှ ၂၁ နှစ်အရွယ်ဝက်ဘ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်နှင့် SEO အထူးကုဖြစ်သည်။ ငါ blogging ကိုနှစ်သက်တယ်၊ ငါမကြာသေးခင်ကငါရေးခဲ့တဲ့အရာအားလုံးဟာအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမကြာသေးခင်ကမှသဘောပေါက်သွားတယ် ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်အိမ်တွင်အဖေအဖြစ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အသစ်အနေနှင့်သူလုပ်ခဲ့ဖူးသောအရာထက်ပိုပြီးမည်သို့ရုန်းထွက်နိုင်မည်ကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားနေသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ဤအွန်လိုင်းကိုတင်လိုက်သည်။ အရာဝတ္ထုတွေတိုးတက်လာတာကိုခင်ဗျားကြည့်ရှုနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
သူ Mike သည်သူ့ site အတွက်အပြင်အဆင်များစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အရောင်များ၊ ဂရပ်ဖစ်များနှင့်အထူးသဖြင့်သူ၏လှပသောသမီး၏ဓာတ်ပုံကိုနှစ်သက်သည်။ သေချာအောင်လုပ်ပါ ကြည့်ယူ! သူ Mike သည်လည်း BlogHelper.org ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဘလော့ဂ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်အထူးဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ site မှာကြီးစွာသောစာဖတ်ခြင်းရှိတယ်။
SitterCity သည်သူတို့၏မစ်ရှင်သည်မိဘများကိုသူတို့ဒေသရှိစောင့်ရှောက်သူများနှင့်ဆက်သွယ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ site ကိုမှနှစ်ဖက်ရှိပါတယ် ... ရှေးရှေးတစ် ဦး စောင့်ကြည့်ရှာဖွေနေနှင့်အလုပ်ရှာဖွေနေစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်သူတို့အားထိုင်! လုံခြုံမှုကိုသင်စိုးရိမ်ပါက၊ LexisNexis ကိုစျေးသက်သာသောဒေါ်လာ ၉.၉၉ ဖြင့် သုံး၍ နောက်ခံစစ်ဆေးမှုတစ်ခုကိုထည့်နိုင်သည်။
ဒီတော့အဲဒီမှာမင်းမှာတစ်ခုရှိတယ်၊ တစ်ခုတည်းသောပို့စ်တစ်ခုမှာဆိုဒ် ၃ ခုရှိတယ်။
Tags: ဂျိုး Pulizziမက်ဆေ့ခ်ျဘားလူမှုရေး bookmarkstoolbar ကိုအပေါ်ဆုံးဘားwordpress plugin ကို
20:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 12, 26
ဒီနေ့ စတိုးမှာ အဲဒါတွေထဲက တစ်ခုကို ကစားတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ PC တစ်လုံးအမြဲရှိတာကြောင့် 'mac world' ကို တစ်ခါမှမသိဖူးပါဘူး။ iMac ကို စမ်းသပ်မောင်းနှင်ပြီးသော်လည်း၊ ၎င်းသည် ကြီးကျယ်သောဆုဖြစ်မည်မှာ သေချာပါသည်။ ဒါက ကေတီအတွက် မင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့သူနဲ့ တူသလား။
20:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 12, 46
Katie တွင် iMac ၏ ရှေ့ CRT မှ eMac တစ်ခုရှိသည်။ ငါအနိုင်ရရင် သူ့အခန်းထဲမှာ သေချာပေါက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
20:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 1, 36
သူမ တော်တော် ကံကောင်းတယ်။ အဲဒီအရာက ကောင်းပါတယ်။
သြဂုတ် 24, 2008 မှာ 2: 47 AM
ကောလိပ်အတွက် mac လိုချင်ပါတယ်။ ဆောင်းရာသီမှာ တက္ကသိုလ်စတက်ဖို့ ဒီပုံလေးလိုတယ်။
မေလ 24, 2009 မှာ 4: 53 pm တွင်
ငါတကယ် iMac လိုအပ်တယ်။ Video Design School ကို တစ်လလောက်နဲ့စပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ iMac များတွင် ထူးထူးခြားခြား ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်မှုများရှိသည်။